Global Voices teny Malagasy » Tonizia: Nisafidy Ny Fitantanana Misokatra Amin’ny Alalan’ny Fampielezam-baovao Sosialy Ireo Mpanao Politika sy Solombavambahoaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Febroary 2012 1:25 GMT 1	 · Mpanoratra Ahmed Medien Nandika Candy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Tonizia, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana momna ny Revolisiona Toniziana 2011 .
Moncef Marzouki (@Moncef_Marzouki ), filoha mpisolo toerana voafidy ho an'ny repoblika Toniziana, Khalil Zaouia (@KhelilEzzaouia ), minisitry ny raharaha sosialy amin'izao fotoana, ary ireo solombavambahoaka hafa avy amin'ny antenimiera mpanorina, tahaka an'i @LobnaJribi  sy @IyedDahmani  dia nisoratra tamin'ny Twitter daholo tao ho ato.
@iyeddahmani : Arahabaina nahatratra ny Mouled (tsingerintaona nahaterahan'ny mpaminany Muhammed) isika rehetra. Hotahiana anie ianareo rehetra.
Mabrouka Mbarek , solombavambahoaka voafidy avy amin'ny antoko CPR dia nizara ny fahadisoam-panantenany tamin'ny fifidianan'ny antokony solombavambahoaka Silamo iray hafa hitondra ny kaomity mamolavola ny lalàm-panorenana vaovao. Bitsika mahatahotra tahaka izao no naverin'ny Toniziana sasany mpampiasa Twitter navoaka imbetsaka, izay mitovy ahiahy aminy [fr]:
@MabMbarek : Indraindray aho manontany tena #JeudiConfession “@MoniaBH: Fa misy inona ao amin'ny CPR?”
@iyeddahmani : Lasa mpifanandrina amin'ny vitsy an'isa ny governemanta. Tsy ny asany no ataony fa ilaozany mandany fotoana mitsikera ny mpanohitra dia avy eo mangataka fotoana (amin'ny mpanohitra) mba hanaovana ny asany, tahaka ny hoe nofatorantsika ireny ery ny tanan-dry zareo.
Nitàna anjara asa lehibe ireo mpampiasa aterineto tamin'ny fitarihana ny mpanao politika amin'ny fampitam-baovao sosialy. Ohatra amin'izany, ny 7ell  dia fampitam-baovao sosialy sy fanentanan'ny olon-tsotra izay nanomboka tamin'ny taon-dasa, mba hitarihana ny mpanao politika sy ireo antoko politika hizara vaovao bebe kokoa amin'ny olom-pirenena. Manana pejy Facebook ny 7ell  ary manana mpankafy maherin'ny 8000 sy lahatsoratra am-polony maro mba hampiroboroboana ny fintantanana misokatra amin'ireo Toniziana mpampiasa Facebook. Voalazalaza toy izao izany tetikasa izany [ar]:
OpenGov  koa dia tenifototra nampiasaina matetika nandritra ny fivorian'ny antenimiera mpanorina. Ankehitriny, solombavambahoaka 217 be izao no mampiasa Twitter mba hizaràna amin'ny vahoaka ny resadresaka atao ao amin'ny fivorian'ny antenimiera.
Azonao atao ihany koa ny manaraka ireo bitsika alefan'ny OpenGov Tunisia amin'ny @OpenGovTN .
Namorona kaonty tao amin'ny Twitter  sy Youtube  ihany koa ny fitondràna Toniziana. Ny fantsona Youtube dia natao handefasana mivantana ireo solotena ofisialin'ny governemanta na tsy miankina amin'ny fanjakana izay mihaona amin'ny Marzouki ao amin'ny lapam-panjakàna any Carthage.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/02/27/28623/
 Revolisiona Toniziana 2011: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/tunisia-uprising-201011/